Haha Poupou dia mampiseho amintsika ny lafiny mahatsikaiky an'ny Star Wars | Famoronana an-tserasera
Haha Poupou dia manolotra ny tranofiara mahatsikaiky ho an'ny sarimihetsika Star Wars vaovao miaraka amin'i Sonata
GIF manome alalana antsika tsara ny isan'ny safidy mba hampisehoana amintsika ny dimy segondra manan-danja amin'ny horonantsary mahatsikaiky na ilay bisikileta izay andrasantsika mitsambikina saka rehefa mijanona eo izy, mandra-pahatsapantsika fa miatrika ny iray amin'ireo tsara misy vokany tsara isika.
Haha Poupou dia mpanakanto GIF sy horonan-tsary miaraka amin'ny fomba hafa fampisehoana ireo sarimihetsika sarimihetsika malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny Star Wars vaovao: The Force Awakens izay avelany hiteny tsy misy fitenenana miaraka amin'io fomba fanamaivanana io isika ny fomba ahafahanao manao esoeso sy vazivazy avy amin'ny iray amin'ireo sagasy malaza indrindra. Raha te hanana fotoana mahafinaritra ianao dia mandehana aloha hijerena ny GIF mahatsikaiky sy mahatsikaiky.
Azo antoka fa izany Tsy dia mampihomehy i Disney, fa ny marina dia manaitra indrindra ny GIF mihetsika sy ilay horonan-tsary. Voalohany, amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo tarehin-tsoratra sy ny fomba fampifangaroana ny singa tsy mitovy hita ao aminy toa i Monty Python tenany no tao ambadiky ny fampisehoana ny vazivazy amin'ilay sarimihetsika Star Wars vaovao.
Fotoana manokana hanehoana ny fomba ny fitsaboana amin'ny maso dia afaka mitondra antsika any amin'ny toeran-kafa Ary ahoana, raha mijery ny antsipirian'ny tarehin-tsoratra tsirairay amin'ity saga mahafinaritra ity isika, dia afaka mahatsapa fa tsy mora ny manao GIF an'ity halaliny ity sy horonan-tsary tany am-boalohany.
Parody iray an'ny tranofiara izay mitondra anao mankany anaty sary mihetsika feno ireo mason'olon'ny tsirairay amin'ireo protas ary ny fomba nitifiran'ny basy poleta laser an'i Han Solo tao anatin'io fomba hafahafa mampiseho ny fomba maha-GIF io dia endrika iray hafa handany ny zavakanto.
El Fantsona YouTube avy amin'i JaJapou.
Mihamatotra kokoa McQuarrie sy ny fanoharany momba ny Star Wars.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Haha Poupou dia manolotra ny tranofiara mahatsikaiky ho an'ny sarimihetsika Star Wars vaovao miaraka amin'i Sonata
Hazo krismasy 14 amin'ny endrika PNG (mangarahara)